Onkoloolessa 16, 2017
Dhuka’aa konkolaataa fe’isaatti guutamee, Sanbata dabre kana magaalaa Moqdishoo keessatti dhoosameen lakkoobsi namoota du’anii dabalaa jira. Har’a gara waaree boodaa ibsi mootummaa Somaaliyaa irraa kenname akka agarsiisutti, lakkoobsi namoota du’anii 276, kanneen madaawan immoo 429 gahee jira. Mootummaan Somaaliyaa, haleellaa akka kanaa biyyattii keessaa dhabamsiisuu yoo fedhe, dhukaatota biyyattii keessatti hojjetaman ilaalchisuu tarkaanfii daran cimaa fudhachuu qaba – jedhu – xiinxaltoonni.
Gama biratiin immoo, hoogganaan gurmuu Al-shabaab duraanii, haleellaa guddaa Sanbata dabre kana magaalaa Moqdishoo keessatti geggeessamee fi yoo xiqqaate namoota dhibba lamaa fi toorbaatamii-ja’a galafate balaaleffatee jira.
Emiirii itti-aanaa Al-shabaab ka ture – Muktaar Rooboo, har’a, magaalaa Moqdishoo bakka dhiigni namoota hedduu itti dhangala’e sana eega daawwatee booda, “gochaan kun, gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaa dha” jechuun balaaleffate.
“Namoonni haleellaa kana dudduuba jiran, kanneen ashaaraan isaanii gochaa kana irra jiru, dhiiga musliimotaa dhangalaasuu irraa of deebisanii gochaa isaanii kanaan dhiifama gaafachuu qaban” jechuun ka dubbate, Muktaar Rooboo, “namoota nagaa fixuudhaan Jeennata galuu hin dandeessan. Namoonni gochaa kana dudduuba jiratan – jechuun kiyya, Al-shabaab, gochaa kana dhaabuu qabdan” jedha.
Ka gara jalqaba waggaa kanaa irra, gurmuu Al-shabaab gananii gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame – Muktaar Rooboo, hundeessaa fi itti-aanaa hoogganaa Al-shabaab ta’uudhaan, bara 2007 haga bara 2011-tti waraana mootummaa fi naga-eegdota Gamtaa Afrikaa waraanaa ture.
Sudaan Kibbaa Daldalaaf Banaa Ta’u Ibsame
Prezidaant Traamp Iraan Irratti Tarkaanfii Haaraan Fudhatamuu Qaba Jedhu